“ဆင်းရဲခြင်းကအကောင်းဆုံးအတွေ့ အကြုံဖြစ်ပါတယ်” - Shwengwe Games
February 25, 2020 Shwengwe Games Knowledge 0
ဖတ်ပြီးတော့ “အရမ်းမှန်တယ်”လို့ခံစားရပါတယ်ဆင်းရဲခြင်းကကျွန်တော်တို့ကို အရာတော်တော်များများသင်ပေးနိုင်တယ်ဘယ်လောက်ထိများလဲဆိုတော့ သူ့ကိုကျေးဇူးတင်ရလောက်အောင် များပါတယ်
ဘယ်လောက်မှ ချမ်းသာတယ်လို့ပြောမှာလဲ ?? ဒီအဖြေကတော့ ဖြေရတာအရမ်းခက်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အတွေးတွေမတူပါဘူး
ဒီနေ့ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံလေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်ငယ်ငယ်ကတည်းက ကျွန်တော်တို့မိသားစုကလဲချမ်းသာတဲ့မိသားစုမဟုတ်ပါဘူးမောင်နှမဆိုလို့ (၃) ယောက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အမေတစ်ယောက်ထဲပဲကြီးအောင်ပြုစုပျိုး ထောင်ပေးခဲ့ပါတယ်
အမေကလဲစီးပွားရေးလုပ်တဲ့နေရာမှာအရမ်းတော်တဲ့သူမဟုတ်တဲ့အတွက် ခက်ခက်ခဲခဲ ကျွေးမွေးခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့် ဆင်းရဲခြင်းနဲ့ရင်းနှီးခဲ့ရတာပါစားစရာမရှိလောက်အောင်တော့မဆင်းရဲခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့တော့ကျော်ဖြတ်ခဲ့ရတာကိုကောင် းကောင်းမှတ်မိပါတယ်
ဒါကြောင့်လဲအသက် ၁၄ ၊ ၁၅ နှစ်က တည်းကရတဲ့အလုပ်နဲ့သုံးစရိတ်ကိုကူညီနိုင်အောင်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်တခါတလေလဲအဲ့ဒီတုန်းကသူငယ်ချင်းတွေကိုကြည့်ပြီး စိတ်အားငယ်တတ်တယ် ၊
(ငယ်သေးတော့ သူငယ်ချင်းရှိရင်လဲရှိချင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကြောင့်ပါ)ဒီတော့ ဘာဖြစ်လို့ကိုယ့်ဘဝက ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲဆိုပြီးဘယ်သူ့ကိုအပြစ်တင်လို့တင်ရမှန်းမသိဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ် (ခုပြန်စဉ်းစားတော့ ရီစရာလေးပါ)
ဆင်းရဲတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူ့ကိုမှမပြောနိုင်ဘူးတက္ကသိုလ်ရောက်တော့ Major မှာ Roll 1 ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်နာမည်ကြီးထမင်း ငတ်ဆိုတာအဲ့ဒီချိန်တုန်းကကျွန်တော် ကိုပြောတာလားမသိရန်ကုန်ကအသုံးစရိတ် နဲ့ ကျွန်တော်တို့နယ်ကအသုံးစရိတ်က
မိုးနဲ့မြေနဲ့ကွာခြားနေတာကတော့ ကျွန် တော်မပြောလဲသူငယ်ချင်းတို့သိမှာပါ
တစ်လတစ်လနယ်မှအေးအေးဆေးဆေးလုံလုံလောက်လောက်သုံးလို့ရပါတဲ့ ငွေပမာဏကရန်ကုန်မှာမရပါဘူးဒါပေမဲ့ အိမ်ကအခြေအနေကိုသိတော့မပူဆာရက်ဘူး
ဒီတော့ကိုယ်ကသူများထက်ကြိုးစားရတယ်ကျောင်းတက်နေရင်းနဲ့ အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်(အိမ်ကမသိခဲ့ပါဘူး)ဒါပေမဲ့ ဒီလောက်နဲ့ဘဝကိုမပြီးဆုံးစေချင်ဘူး ဘဝဘယ်လိုရှေ့ဆက်လျှောက်ရမှာလဲဆိုတာတွေးလာတယ်
ဒါပေမဲ့ တွေးတာတော့တွေးတာပါပဲပတ်ဝန်းကျင်ရင်းနှီးတဲ့သူကိုပြောတော့လဲအခုကောင်းနေတာပဲ ဘဝကဒီလိုပါပဲ အလိုလိုနေရင်းနဲ့ကောင်းလာမှာပါလို့ ပြောကြတယ်(ဟုတ်ရင်ဟုတ်မှပေ့ါ )
ကျွန်တော်ကသူများထက်ပိုတော်လို့ပိုပြီးညဏ်ကောင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘဝမှဒီထက်နောက်ဆုတ်စရာလမ်းမရှိတော့လို့ပါနောက်ဆုတ်လို့မရလို့ ရှေ့ရောက်တာပါခေါင်းငုံ့ပြီးကိုယ့်လမ်းကိုလျှောက်လာတာနှစ်နဲ့ချီလာတော့ဒီနေ့ ဒီနေရာကိုပုမသိပမသိနဲ့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်
ဒီနေရာရောက်တယ်ဆိုတော့အရမ်းချမ်းသာပြီလားဆိုတာမဟုတ်ပါဘူး ဒါပေမဲ့ မဆင်းရဲတာတော့သေချာပေါက်ပြောနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ပြောချင်တာက“ဆင်းရဲခြင်းဆိုတာအကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံတစ်ခုပါ”
ပထမ (၁)ချက်စိတ်ခွန်အားကအရေးကြီးဆုံးပါ စိတ်ခွန်အားကအရေးကြီးဆုံးအရာလေးတစ်ခုပါအကယ်၍ကိုယ်ကအဲ့ဒီအခြေအနေမှာရှိနေတယ်၊ပြီးတော့ကိုယ်ကလဲအဲ့ဒီအခြေအနေအကြောင်းကိုပဲတွေးနေမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကပိုပြီးတော့ ဆင်းရဲမှာပါပဲ
ကိုယ်ကိုတိုင်ကကိုယ်ကိုကိုယ်ပြန်ထနိုင်အောင်ကူညီရပါလိမ့်မယ်မဟုတ်ရင် ဘယ်သူကိုယ့်ကိုလာကူညီဖို့မျှော်လင့်မှာလဲဒီနေ့ကျွန်တော်မှန်ကိုကြည့်ပြီးစကားတစ်ခွန်းပြောလိုက်တယ်“ဒီမျက်နှာကအခက်အခဲတွေ့တိုင်းငိုတတ်တဲ့ပျော့ညံ့တဲ့သူမဟုတ်တော့ဘူး၊ အောင်မြင်တဲ့သူရဲ့မျက်နှာဆိုတာဒါပဲလို့”
ကိုယ့်ကိုကိုလိမ်တာလားတော့မသိဘူး ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောလိုက်တော့ အလုပ်လုပ်ဖို့ပိုပြီးစိတ်ခွန်အားရှိသွားတာအမှန်ပါပဲ
မယုံရင်စမ်းကြည့်ပေ့ါ (ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲနေတဲ့အချိန်မှစမ်းပါနော် ၊ သူများရှေ့မှာဆိုရင်တော့အင်း)
ကိုယ်မဖတ်ဖူးတဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်ပါ(အောင်မြင်မှုစာအုပ်၊အကောင်း ဖက်မြင်တဲ့စာအုပ်)ကိုယ်မပေါင်းဖူးတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်နဲ့ စမ်းပေါင်းကြည့်ပါတစ်နေ့လုံးဘာမှလုပ်စရာမရှိပဲ တစ်ယောက်ထဲမနေပါနဲ့ တစ်ယောက်ထဲနေရင် ကိုယ့်ရဲ့အတွေးကိုသတိထားပါလို့ ကျွန်တော်သတိပေးချင်ပါတယ်
စိတ်ခွန်အားရောက်မှအလုပ်စလုပ်မယ်လို့ မစောင့်ပါနဲ့ တစ်ခုခုလက်တွေ့စပြီးလုပ်ပါအဲ့ဒီချိန်မှာစိတ်ခွန်အားဆိုတာပေါ်လာ မှာပါ
ဒုတိယ(၁)ချက်ကိုယ်တတ်တဲ့အရည် အချင်းအတတ်ပညာကိုအရင်းဖြစ်အောင်လုပ်ပါကိုယ့်မှာမှ ပိုက်ဆံမရှိတာ ဘယ်ကနေအရင်းသွားရှာမလဲ ??ဒါ ကြောင့်အား(သို့မဟုတ်) အရည် အချင်းအတတ်ပညာကိုရောင်းရတာပေါ့ဒီနေရာမှာကိယ့်ရဲ့အရင်ဘဝကကုသိုလ်ကံပေါ်မှာဆိုင်သွားပြီနော်
အတိတ်မှာဘာအရည်အချင်း ကိုသင်ယူထားလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာလဲဆိုင်သွားပါပြီဘာပညာကိုတတ်အောင်သင်ထားတာလဲ ?? ဘာအလုပ်မှာ သူများချီးကျူးရလောက်အောင်လုပ်ခဲ့ဖူးလဲ ??
အကယ်၍မရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒီနေ့စိတ်နှစ်ပြီးကြိုးစားလုပ်သွားပါစုသွားပါ။တရက်ရက်အရင်းတစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်လာမှာပါ ဒါပေမဲ့ အကယ်၍ကိုယ့်ဆီမှာအရည် အချင်းရှိနေတယ်ဆိုရင်
(၂) ဒီအရည်အချင်းကို ပိုပြီးတော့ တန်ဖိုးရှိအောင်လုပ်တတ်ရပါမယ်
(၄) ကိုယ့်အတွက်အခွင့်အရေးကိုရအောင်ရှာရပါမယ်အခွင့် အရေးသစ်ကို ကိုယ်ကိုတိုင်တည်ဆောက်ရပါမယ်လူတွေ ကိုများနိုင်သလောက်များအောင်အကျိုးပြုသက်ရာက်နိုင်တဲ့အရာကိုလုပ်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေကကိုယ့်အကျိုးပြုတဲ့သူပေါ်မှာတိုက်ရိုက်ပတ်သက်မှုရှိပါတယ်
ကျွန်တော်လဲဒီနည်းနဲ့ ဘဝကိုစခဲ့တာပါအရည်အချင်းကို အရင်းဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲပါဒီထိဖတ်လာပြီးဒီနေ့ မဆင်းရဲတဲ့သူငယ် ချင်းသင်အရမ်းကိုကံကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဗဟုသုတ ၊ ပညာ၊အတွေးအခေါ်ကို အနာဂတ်မှာသုံးဖို့စုဆောင်းထားပါ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ မိုးကပြန်ချိန်မှာပြန်ရွာမှာလဲဆိုတာမသိနိုင်ပါဘူး
ဒီထိဖတ်ပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဆင်းရဲတွင်းမှလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အရည်အချင်းပညာကိုတစ်ချက်ပြန်ရှာကြည့်ပါရှိလား?အကယ်၍ မရှိဘူး ၊သို့မဟုတ်ရှိလဲအရမ်းသာမာန်ဖြစ် နေတယ်ဆိုရင်လက်ခံရမှာပါ။နောက်မဆုတ်စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့ဗဟုသုတအသစ်ကိုရအောင်ရှာပါတဖြည်းဖြည်းစုဆောင်းသွားပါအလုပ်ဝင်ငွေတည်ဆောက်နိုင်တဲ့ဗဟုသုတကYoutube ထဲမှာလဲရှိပါတယ်
နေ့တိုင်း ဟာသ ဗီဒီအိုတွေ တစ်နေ့လုံးထိုင်ကြည့်ပြီးအချိန်ကုန်အောင်မလုပ်ပဲကိုယ်လုပ်နိုင်သလောက်လုပ်သွားပါလို့ပြောချင်ပါတယ် ဒီနေ့ ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာကိုယ့်အပြစ်မဟုတ်ပါဘူး ဒါပေမဲ့နောက်တစ်နှစ်မှာ ဆင်းရဲနေသေးတယ်ဆိုရင်တစ်ခုခုတော့မှားနေပါပြီဘယ် သူ့ကိုမှအပြစ်မတင်ပါနဲ့ကိုယ့်ကြောင့်ပါပဲ
မွေးလာတာဆင်းရဲတာကိုယ့်အပြစ်မ ဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သေတဲ့ချိန်မှာဆင်းဆင်းရဲရဲသေရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ သင့်အပြစ်ပါဒါကြောင့်ဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့အရာထဲမှာမှ အတွေ့အကြုံ(၂)ခုသင်ပေးခဲ့ပါတယ်စိတ်ဓာတ်ခွန်အားကောင်းကောင်းလုပ်ထိန် းသိမ်းပြီးအရည် အချင်း ကိုအရင်းဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာပါပဲအရမ်းကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံဆိုပေမဲ့ ဘယ်တော့မှပြန်မကြုံတွေ့ချင်တဲ့အတွေ့ အကြုံလေးဖြစ်ပါတယ်
Edward Bok ပြောထားသလိုပါပဲ “ဆင်းရဲခြင်းဆိုတာက အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ကတော့ အဲ့ဒီဆင်းရဲခြင်းကနေဝေးအောင်လုပ်သင့်တယ် ” တဲ့
ကမ္ဘာကြီးဟာ ပြားနေကြောင်းသက်သေပြမယ်ဆိုတဲ့အမျိုးသား ဒုံးပျံပျက်ကျသေဆုံး
ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားဖူးသွာရင်းနိုင်ငံခြားသူမဟုတ်ကြောင်း သက်သေပြခဲ့ရတဲ့ ပန်ကိတ်ဒါဒါ